Banyere Anyị - Changzhou Sdpac Co., Ltd.
Ọhụhụ ụlọ ọrụ ahụ bụ "ịgba mbọ wuo ewu ewu plastik a ma ama n'ụwa niile" ma guzobe usoro ọdịnala ya pụrụ iche
"Hụ ọdịnihu, naanị mee pail"bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị.
Changzhou SDPAC Co., Ltd. ga-emepụta usoro nke ihe kacha mma US plastic pails iji gboo mkpa nke ndị ahịa kachasị elu. Site na mmepe nke akụrụngwa na akụrụngwa na ahịa anụ ụlọ, ọnụ ahịa nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịka mma. Nkwakọ ngwaahịa ngwugwu na-ekere òkè dị mkpa n'ịbawanye uru nke ngwaahịa ndị ọzọ. Dị ka akara nke nkwakọ ngwaahịa dị elu, paịlị plastik na-agbanwe mgbe niile ụkpụrụ nke ngwugwu nkwakọ ngwaahịa n'ahịa. Anyị kwenyesiri ike na ọdịnihu nke paịlị plastik bụ ihe ọhụrụ dị omimi, ma gosipụta oge ngwaahịa ahaziri iche.
Companylọ ọrụ anyị etinyela nchebe gburugburu ebe obibi na ọnọdụ dị mkpa na atụmatụ mmepe ụlọ ọrụ. Mgbe ị na-enye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị elu, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro nchedo gburugburu ebe obibi iji nweta mmepe na-adigide. Anyị ga-ejikọ njikwa gburugburu ebe obibi na njikwa ụlọ ọrụ, ma jiri nwayọọ nwayọọ guzobe ma melite nzukọ na usoro ọrụ nke njikwa gburugburu ebe obibi. Ilekọta ụwa anyị bi na ya, na-ebelata nsị na-emetọ ikuku ma na-echekwa ike bụ ebumnuche ebighi ebi anyị.
2010 VBỌCHOU KWES PAR PA &B AR A A SERIES & SQUARE PAIL SERIES
2011 DEVELOP Gburugburu PA B usoro
2012 Mepụta mmepe niile
2013 VD ST KWES STR ST KWESIGHTR ST .LỌ
2014 Mepụta arịa ndị nwere
2015 MGBE MGBE OZI & GAMMA LID
2016 DEVELOP gburugburu agba akwụkwọ C usoro
2017 DEVELOP Gburugburu PA D usoro
2018 DEVELOP ELATRONIC PASTE P SR S usoro
2019 DEVELOP PATSALY CARTRIDGES & NKPỌBASEA ASEBỌ